အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးလိုပါသလား။ (၁) | ABC Radio Australia
အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးလိုပါသလား။ (၁)
Lesson2of 14ပြောင်းရန်
အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ​​ပတ်သက်ပြီး ​​မေးစရာမေးခွန်းတွေရှိရင် ​​အချိန်မရွေးမေးနိုင်ပါပြီ။ ​ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ​​မေးနေကြတဲ့ ​မေးခွန်းကတော့ ​​လူတွေဘာဖြစ်လို့ ​​crocodile ​​tears ​​"မိကျောင်းမျက်ရည်" ​​ဆိုပြီး ​​သုံးကြပါသလဲတဲ့။ ​​ဘာဖြစ်လို့ ​​elephant ​​tears ​​"ဆင်မျက်ရည် ​​" ​​ဆိုတဲ့ ​​အသုံးအနှုန်းကို ​​မသုံးကြသလဲလို့ ​​မေးလာပါတယ်။
Sophie ​Lawrence ​ဆိုတဲ့လူက ​
What ​does ​the ​term ​'crocodile ​tears' ​mean? ​"မိကျောင်းမျက်ရည်ကျတယ်ဆိုတာ ​ဘာကို ​ဆိုလိုတာလဲ" ​လို့ ​မေးလာပါတယ်။
Crocodile ​tears ​ဆိုတာဟာ ​မျက်ရည်အတုကို ​ခေါ်တာပါ။ ​တကယ်ဝမ်းနည်းတာ ​မဟုတ်ပဲ ​ဟန်ဆောင်ကျတဲ့ ​မျက်ရည်ကို ​ဆိုလိုတာပါ။ ​ဥပမာ"He ​turned ​up ​at ​the ​funeral ​and ​shed ​a ​few ​crocodile ​tears. ​He ​never ​visited ​her ​once ​when ​she ​was ​in ​hospital." ​လို့ပြောရင် ​"သူမရဲ့ ​အသုဘမှာ ​သူက ​မျက်ရည်တုတွေနဲ့ ​လာငိုလိုက်သေးတယ်၊ ​သူမဆေးရုံတက်တုန်းက ​တခါမှတောင် ​မလာခဲ့ဖူးဘူး ​" ​လို့ ​ပြောတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။ ​မိကျောင်းတွေဟာ ​စိတ်ခံစားချက်ကြောင့် ​မျက်ရည် ​မကျတတ်ဘူးလို့ ​ယူဆတဲ့အတွက် ​အခုလို ​သုံးနှုန်းလိုက်တာလို့ ​ယူဆနေကြပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံက ​Bobbylash ​Las ​ကလည်း ​အခုလို ​မေးမြန်းထားပါတယ်။ ​
ဆိုဖာပေါ် ​လဲချတယ်လို့ ​ပြောချင်ရင် ​I ​lay ​out ​on ​the ​sofa ​ကမှန်သလား ​ဒါမှဟုတ် ​I ​lie ​on ​the ​sofa ​က ​မှန်သလားတဲ့။
သဒ္ဒါနည်းအရ ​နှစ်ခုစလုံးက ​မှန်ပါတယ်။ ​'Lie' ​ဆိုတာ ​ပစ္စုပ္ပန်ကာလ ​the ​present ​tense ​ဖြစ်ပြီး ​'lay' ​ကတော့ ​"lie" ​ရဲ့ ​အတိတ်ကာလကိုဖော်ပြတဲ့ ​past ​tense ​ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ​ပစ္စုပ္ပန်နဲ့ ​အတိတ်ကာလပြ ​မူသေကြိယာ ​past ​participle ​ဒါမှမဟုတ် ​verb ​3 ​က ​‘lain’ ​ဖြစ်တဲ့အတွက် ​"I’ve ​lain ​on ​that ​sofa ​too." ​လို့ ​ပြောရင်လည်း ​မှန်ပါတယ်။ ​ဒါပေမယ့် ​“lay” ​ဆိုတဲ့ ​ကြိယာမှာ ​တခြားအဓိပ္ပာယ်လည်း ​ရှိတဲ့အတွက် ​တော်တော်လေး ​မှတ်ရခက်ပါတယ်။ ​‘lay’ ​ရဲ့ ​အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ​“ခင်းကြင်း ​ချထား” ​ခြင်း ​ဖြစ်သလို ​ကြက်၊ ​ဌက်တွေ ​‘lay’ ​လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ ​“ဥဥ” ​တာကို ​ပြောတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။ ​ ဒါကြောင့် ​‘lay’ ​ဆိုတာ ​‘lie’ ​ရဲ့ ​အတိတ်ကာလပြ ​ကြိယာဖြစ်သလို ​တခုခုကို ​ခင်းကြင်း ​ချထားတဲ့အခါမှာလည်း ​‘lay’ ​ဆိုတဲ့ ​စကားလုံးကို ​သုံးနိုင်ပါတယ်။ ​အဲဒီ ​‘lay’ ​ရဲ့ ​past ​participle ​ကတော့ ​‘laid’ ​ပဲ ​ဖြစ်ပါတယ်။
Miki ​Dana ​ကလည်း ​အခုလို ​မေးမြန်းထားပါတယ်။ ​
မိဘနှစ်ဦးစလုံးက ​အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေ ​မဟုတ်ကြဘူးလို့ ​ပြောချင်ရင် ​'...neither ​of ​my ​parents ​is ​English ​လို့ ​ပြောရသလား ​ဒါမှမဟုတ် ​none ​of ​my ​parents ​လို့ ​သုံးရမလားလို့ ​မေးထားပါတယ်။
အဖြေကတော့ ​‘neither ​of ​my ​parents ​are ​English’ ​ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံက ​Lar-Akie ​Ernest ​McZik ကတော့ ​ဆူပါမတ်ကက် ​ဈေးဆိုင်ရဲ့ ​ငွေရှင်းကောင်တာမှာ ​အလုပ်လုပ်တဲ့လူကို ​ 'sales ​girl ​ဒါမှမဟုတ် ​sales ​boy' ​လို့ခေါ်သလားလို့ ​မေးလာပါတယ်။
အဖြေကတော့ ​ငွေရှင်းစင်တာကလူတွေကို ​‘sales ​girl’ ​‘sales ​boy’ ​လို့ ​ခေါ်လေ့မရှိပဲ ​salesperson ​ဒါမှမဟုတ် ​salesman ​လို့သာ ​ခေါ်ကြပါတယ်။ ​ဆိုင်ထဲမှာ ​အလုပ်လုပ်တဲ့ ​အမှုထမ်းတွေကိုတော့ ​shop ​assistants ​လို့ခေါ်ပါတယ်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာတော့ ​ဆူပါမတ်ကက် ​ဈေးဆိုင်မှာ ​အလုပ်လုပ်တဲ့ ​အမျိုးသမီးငယ်ကို ​checkout ​girl ​လို့ခေါ်သလို ​အရပ်သုံးအနေနဲ့ ​checkout ​chick ​လို့လည်း ​ခေါ်နိုင်ပါတယ်။